Fanjakana mpampihorohoro : naiditra eny Antanimora ho gadra politika… Andriamananoro Augustin | NewsMada
Fanjakana mpampihorohoro : naiditra eny Antanimora ho gadra politika… Andriamananoro Augustin
Naiditra eny amin’ny fonjan’Antanimora ny mpisehatra politika, Andriamananoro Augustin. Mitohy ihany ny fanjakana mpampihorohoro, fanjakana polisiera… Gadra politika io mpanao politika io amin’izao?
Raikitra, omaly, ihany ny fanolorana an’Andriamananoro Augustin ny fampanoavana teny Anosy. Tsy naharitra ela ny fihainoan’ny fitsarana azy ity, fa tao anatin’ny ora vitsy monja, naiditra am-ponja vonjimaika eny Antanimora izy. Tsy ela ihany koa fa amin’ny talata ho avy izao, amin’ny 8 ora maraina, hiatrika ny fitsarana avy hatrany ity mpanao politika ao amin’ny vondrona Mapar ity. Fikasana hanongam-panjakana, fitarihana olona hikomy sy hetsika tsy nahazoana alalana tany Soamahamanina ny vesatra anenjehana azy, raha ny fanazavana azo avy amin’ny mpitandro filaminana.
Araka ny fanazavana azo ihany, tany amin’ny borigady Ambatomirahavavy no nitazonana azy ity ny alarobia alina. Natao ho fiarovana azy amin’ny zavatra mety hiseho izany, raha ny fantatra. Tsy nampahafantarina na iza na iza ny toerana nitazonana azy io alina io. Niteraka resabe teo amin’ny mpanara-dia azy sy ny mpanara-baovao io fanjavonana io, ka niheveran’ny maro fa mbola tsy hatolotra ny fampanaovana izy, na efa mihoatra ny 48 ora aza nitanana azy.
Niala teny Ambatomirahavavy, nentina teny Ankadilalana ary natolotra ny fampanoavana teny Anosy, omaly maraina io. Nivezivezy, araka izany, ireo mpanara-dia azy tanatin’izany rehetra izany, ka nielezan’ny feo ny amin’ny hoe fanafenana azy. Raha ny fanazavana hatrany, noesorina tamin’ity minisitra teo aloha ity avokoa ny mari-boninahitra tany aminy, izay manakana ny tsy fahafaha-manenjika azy.
Ireo olon’ny Mapar tonga teny Anosy tamin’io, hendratrendratra ihany manoloana ity tranga ity. Vitsy rahateo izy ireo tonga teny an-toerana, nahitana ireo lohandohan’ny mpisorona, na niezaka nitaona olona aza.
Manao fanjakana polisiera ny mpitondra
Fikasana hanongam-panjakana. Anisan’izay heverina ho reniben-keloka amin’izao “Raharaha Andriamananoro Augustin” izao io, hanenjehana azy ary ahina hanamelohana azy. Politika izany. Nefa izay indrindra koa no azo itsarana ny fitondram-panjakana amin’izao, raha ny fijerin’ny mpandinika sasany.
Efa tsy vaovao amin’izao fitondrana izao ny tahotra fanonganam-panjakana. Izay mihetsika rehetra, ampangaina ho izany avokoa: eny, na izay miaro ny tanindrazany aza, na miara-dia fotsiny amin’ny mpiray tanindrazana aminy…
Tsy fitadiavana ny marina ny raharaha, fa fitadiavana izay hanamelohana olona mba hampangina asy hampifitsika izay mitady hiteny sy hihetsika rehetra. Izay ilay politika maloto: fanjakana polisiera amin’ny fampihorohoroana sy fampiasana herim-pamoretana. Toy ny efa nahatra tamin’ireo mpitarika hetsika teny amin’ny oniversite.
Gadra politika Andriamananoro Augustin
Noho izay politika maloto izay: azo tombanana na lazaina ho gadra politika io mpisehatra politika io amin’izao fitondrana Rajaonarimampianina izao. Fandemena ny vondrona politika misy azy, na fampitandremana izay mitady hiteny sy hihetsika rehetra… iandrasana kendry tohina?
Hanaratsy endrika ny fitondrana sy i Madagasikara ary hipetraka ho tantara indray izao. Eo, ohatra, ny amin’ny tsy fanajana ny zon’olombelona tamin’ny fanatsoahana ny mari-boninahitra ny olona enjehina. Mampieritreritra kosa ny tsy fanajana ny fe-potoana fitanana azy, ny tsy filazana izay nitanana azy na eo aza ny hoe fiarovana ny ainy, ny fanafainganana tampoka ny raharaha. Fombafomba avokoa izany, fa efa fantatra mialoha izay hanaovan’ny fanjakana polisiera azy… gadra politika? Mampanahy be ihany ny hoe amin’ny hoe fampihavanana hirahiraina tato ho ato amin’izany…
Mitaky ny famoahana azy ny vondrona politika Mapar
Manameloka avy hatrany izao fisamborana sy fitanana am-ponja vonjimaika an’Andriamananoro Augustin izao ny vondrona politika Mapar, araka ny fanambarany teny Ambodivona, omaly. Takiny ihanay koa ny famoahana azy, ny fampitsaharana avy hatrany izao karazana fampitahorana sy fanenjehana ary fisamborana izao… Hanao ahoana ny ho tohin’ny raharaha?
Yves S./ R. Nd.